Gmail မှ ဖုန်းခေါ်နိုင်ပြီ နှင့် Gmail အသုံးပြုနည်း (အဆက်) - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Gmail မှ ဖုန်းခေါ်နိုင်ပြီ နှင့် Gmail အသုံးပြုနည်း (အဆက်)
Posted by ukkmaung on August 30, 2010 at 2:55pm
(၁) ဂျီမေးလ်မှ ဖုန်းခေါ်နိုင်ပြီ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ အခမဲ့ဖြစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တစ်မိနစ် ၃၅ ဆင့်ကျမည်
သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၀
အင်တာနက် Search engine (ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်) ကုမ္ပဏီများအနက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီနှင့် လူသုံးအများဆုံး အခမဲ့ ဂျီမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် ဂူးဂဲလ်
Google သည်လည်း VOIP စီးပွားရေးနယ်ပယ် သို့ယနေ့မှ စတင်ဝင်ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ် ကုမ္ပဏီသည် ယမန်နေ့မှ စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲနေပြီး ယနေ့ တရားဝင်ဖွင့်လှစ် ကြေညာလိုက်သည့် ဂူးဂဲလ်၏ ၀န်ဆောင်မှု အသစ်တွင် မိမိ၏ ဂျီမေးလ် အကောင့်မှ
နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ကြိုးဖုန်း (landline phone)၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့
ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုစတင်လိုက်သည့် ၀န်ဆောင်မှု အသစ်ဖြင့်
အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံများသို့ အခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး
အခြားနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ ခေါ်ဆိုမှုနှုန်းထားများကိုမူ ဂူးဂဲလ်ဝက်ဆိုက် https://www.google.com/voice/rates တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖုန်းများသို့ ခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ် ၃၅ ဆင့်(ကျပ် ၃၅၀ ၀န်းကျင်) ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူသို့ခေါ်ဆိုလျင် ၂ဆင့်(၂၀ ကျပ်ဝန်းကျင်)
ယခုဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲလိုပါက ရှေးဦးစွာ မိမိဂျီမေးလ် စဖွင့်သည့်အခါ ၀န်ဆောင်မှု အသစ်ကို သုံးစွဲလိုခြင်းရှိမရှိ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို
မေးခွန်းမေးသည့် new! make phone call from Gmail အားကလစ်လုပ်ပြီးနောက်
ဂျီမေးလ်၏ voice and video chat ဆော့ဝဲကိုအင်စတောလ်
လုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အင်စတောလ် လုပ်ပြီးနောက်တွင် အင်တာနက် ဘရောက်ဆာအား
တကြိမ်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်သည်မှ စတင်ကာ သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ယခု ဂျီမေးလ် အင်တာနက်ဖုန်းမှ ရန်ကုန်ရှိဖုန်းသို့ ခေါ်ဆိုကြည့်သည့်အခါ +17607058888 အ၀င် နံပါတ်ဖြင့် ဖုန်းမြည်လာသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း မိမိ၏
မေးလ်အကောင့်ထဲတွင် ငွေမဖြည့်ထားသည့် အတွက် ယခုလောလောဆယ် ပြောဆိုမရသေးဟု
ရန်ကုန်မြို့မှ သုံးစွဲသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
အင်တာနက်ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုပြီး ကြိုးဖုန်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများဆီသို့ ခေါ်ဆိုသည့် နည်းပညာကို voice over internet protocol VOIP ဟုခေါ်ဆိုပြီး လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်
တစ်စုအတွင်း တရှိန်ထိုးကြီးထွားလာရာ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့တွင် စင်္ကာပူ
အခြေစိုက် Pfingo အင်တာနက်ဖုန်းဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသို့ ခေါ်ဆိုသည့်
၀န်ဆောင်မှုကို အင်တာနက်ဆိုင် အများစုက ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံအပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်မိနစ်ကို ကျပ် ၅၀မှ အများဆုံးကျပ် ၅၀၀ အထိပေးရသော်လည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဖုန်းဖြင့် ပြည်ပသို့ခေါ်ဆိုလျင် တစ်မိနစ်
အနည်းဆုံး ကျပ် ၉၀၀မှ အများဆုံးကျပ် ၄၅၀၀ အထိကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။ VOIP
စနစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေါ်လာပြီးနောက် ပြည်ပသို့
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုမှု မရှိသလောက် နည်းသွားသည်ဟု
Pfingo အင်တာနက် ဖုန်းစနစ်ကဒ်ဖြည့်သွင်းမှုကို ယခင်က စင်္ကာပူနိုင်ငံ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေနိုင်သော်လည်း ယခုအခါ ကြိုတင်ငွေပေးကဒ်များအား
ရန်ကုန်မြို့ကွန်ပျူတာပစ္စည်း ရောင်းချသည့် ဆိုင်များတွင်လည်း
၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ ၁၂ ဒေါ်လာတန် Pfingo ကဒ်တစ်ကဒ်ကို ကျပ်ငွေ
၈၇၀၀ ဖြင့်ရောင်းချလျက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအတွင်း အင်တာနက်သုံးစွဲမှု ပျံ့နှံ့လာခြင်းနှင့် အတူ VOIP စနစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့အနှံ့မှ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး
ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ၀င်ငွေသိသာစွာ လျော့ကျသွားခဲ့ရပြီး အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးများ
ဘန်ကောက်မြို့တွင် နေထိုင်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မိသားစုရှိရာ အင်္ဂလန်သို့ ဖုန်းဆက်သွယ်ရန် ယခင် တစ်လလျင် ဒေါ်လာ ၁၀၀မှ ၁၅၀
ထိသုံးစွဲခဲ့ရသော်လည်း အင်တာနက်နှင့် VOIP ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်တွင် အင်တာနက်
ဆက်သွယ်မှု အဖိုးအခမှ လွဲ၍ ဖုန်းဆက်သွယ်မှု အတွက် တပြားတချပ်မျှ သုံးစွဲစရာ
(၂) (၁) gmail, google, VoIP, နည်းပညာ, ဖုန်းခေါ်နည်း
အင်တာနက် အင်အားကြီး ကုမ္ပဏီ Google သည် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၎င်း၏ Gmail စနစ်အတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ထည့်သွင်းခဲ့ရာ ယူအက်စ်
နှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများရှိ ဖုန်းများသို့ အခမဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး
ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ အလွန်သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့်
Gmail အတွင်းရှိ ဗီဒိယို ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ကဲ့သို့ပင် ယခု အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို Chat window မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး voice cancellation နည်းပညာကို အသုံးပြု ထားသောကြောင့်
အသံပဲ့တင်ထပ်ခြင်းကို အနည်းဆုံ လျော့ချနိုင်ပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားစွာ
Google မှ Gmail အတွင်း အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းလိုက်ပုံ။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET
အသုံးပြုသူများသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ကနေဒါ နိုင်ငံများသို့ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုပါက အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ကာ စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ရန် Gmail
အကောင့် တစ်ခုလျင် Credit အဖြစ် 0.10 ဒေါ်လာ ထည့်သွင်းပေးထားသည်။
Gmail အတွင်းမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သော Dail Pad။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET
သို့သော် Google၏ နိုင်ငံတကာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားများမှာ သက်သာပြီး Skype ကဲ့သို့သော အခြား VoIP ဝန်ဆောင်မှုများအား ၎င်း၏သက်သာသည့် ခေါ်ဆိုခနှုန်းများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်သွားဖွယ်ရှိသည်။
Google ၏ နိုင်ငံတကာ ခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားများကို အခြား VoIP ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်စဉ်။ Photo:Screenshot by Jessica Dolcourt/CNET
Google ၏ နိုင်ငံတကာ တယ်လီဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုသော သူများအနေဖြင့် Google Checkout စနစ်မှတစ်ဆင့် calling credit များဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
gmail မှာ phone call မပေါ်တဲလူတွေအတွက်
ကဲ gmail မှာ free phone call ထည့်ကြမယ် တချို့ gmail တွေမှာမရကြဘူး
ဗျာဒါကြောင့် မရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ဒီ phone call လေးကတော့ usa
နှဲ canada နှဲကတော့ free ပေါ့ တခြားနိုင်ငံတွေကြတော့ 1 minuate ကို us
ငွေ2¢ 29 ¢3¢ အမျိုးမျိုးပေါ့ us နှဲ canada မှာနေတဲ့လူတွေကြတော့ကောင်း
တာပေါ့ free ဆိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံကိုဘယ်လောက် ¢ ပေးရမှာလဲသိချင်ရင်တော့
ဒီမှာသွားကြည့် လို့ရပါတယ်။ အလွန်ကိုကောင်းပါတယ် ကျွှန်တော်က usa မှာ
နေတယ်ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဒါဆိုရင်တော့အကိုတို့အမတော့ gmail မရှိရင်တော့
ဒီနည်းလေးကိုသုံးလိုက်ပေါ့။ ဒီမှာ install လုပ်ပါ download လုပ်ဖို့အတွက်
ဆိုရင် Double click > နှိပ်ရပါမယ်။ အားလုံးလဲအဆင်ပြေမယ်လို့
(၃) Gmail Inbox ကို Filter ခွဲထားမယ်
ကိုယ့်ရဲ့Gmail Inbox ထဲမှာ mail တွေရှာရတာအာရုံနောက်နေတယ်ဆိုရင် Filter ခွဲထားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ကိုယ် Filter ခွဲချင်တဲ့ mail ကိုအရင်ဆုံး Select လုပ်လိုက်ပါ။(Starred (ကြယ်ပုံ)ဘေးက လေးထောင့်အကွက်ထဲ မှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးတာပါ)
ပြီးရင် More actions ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲက Filter messages like these ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
CreateaFilter ဆိုတဲ့ Box ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Next Step> ကိုနှိပ်ပါ။
Skip the Inbox (Archive it)
Apply the label:
စတာတွေကို Select ပေးပါ။ (လေးထောင့်အကွက်ထဲ မှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးတာပါ)
Apply the label: Choose label... မှာ New label... ကိုရွေးပေးပါ။
New label... ဆိုတဲ့ box ကျလာပါမယ်။
ကိုယ်ခွဲတဲ့Filter ရဲ့Name ကိုရေးပေးပါ။
(ဥပမာ။ ။Foreverfriends ကပို့ တဲ့ မေးလ်ကို Filter ခွဲတယ်ဆိုရင် Foreverfriends လို့ ရေးပါ။)
ပြီးရင် Also apply filter to ? conversations below. ကို Select ပေးလိုက်ပါ။ (လေးထောင့်အကွက်ထဲ မှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးတာပါ)
ပြီးရင်တော့ Create Filter ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Filter ခွဲလို့ ပြီးသွားပါပြီ။။။
(၄) g-Talk Block
Gtalk ကနေ မိမိနှင့် အဆင်မပြေသူကို မိမိဘက်က Block သို့ Remove လုပ်လိုက်ရင် မိမိဘက်ကသာ သူ့ကိုမမြင်ရတော့ပေမယ့် မိမိ Block သို့ Remove လုပ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ Gtalk မှာတော့ မိမိနာမည်ရှိနေသေးတဲ့အတွက် သူ့ဘက် Chat
လို့ရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က Block လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ Gtalk List မှာ
ရှိနေဦးမှာပါ.။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် အပြီးအပိုင်
ပထမဦးဆုံး Gmail ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Contacts ကို ရှာပြီး Click
နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ Contacts Box ကျလာရင် မိမိ Delete လုပ်ချင်သော
Account ကို ရွေးပြီး အမှန်ခြစ်ကာ Delete group ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။
တကယ်ဖျက်မှာလားလို့မေးတဲ့ Box ကျလာရင် OK ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို
မိမိမဆက်သွယ်လိုသူကို အပြီးအပိုင် သံယောဇဉ်ဖြတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ။
သူ့ရဲ့ Gtalk မှာလည်း မိမိအမည် မရှိတော့သလို သူ့ Gtalk မှာလည်း ကိုယ့်အမည်
(၅) Mail အဟောင်းမှ သူငယ်ချင်းများကို မေးလ်အသစ်မှာ အလွယ်တစ်ကူအပ်နည်း
မေးလ်အဟောင်းမှာ မသုံးချင်လို့ မေးလ်အသစ်မှာ တစ်ဦးချင်းADDရမှာ စိတ်မရှည်တဲ့ လူများအတွက် အလွယ်တစ်ခု မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်ပြီး မေးလ်အသစ်မှာ invite လုပ်ရ အောင်
1. မေးလ်ကို open ပါ။ contacts ကို click ပါ။
2. မေးလ် အပေါ်ထိပ်မှာ import , export, print ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ပထမ export ကို click ပါ ။
3. အဲ့ဒီမှာ မိမိက My contacts ကိုပဲ invite
လုပ်မှာလား ဒါမှမဟုတ် Most Contacts, Friends, Family, Coworkers Suggested Contacts ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးပါ။
4. Export ကို click ပါ
5. အဲဒီ Export ဖိုင်က "Contacts.csv" အမည်နဲ့ Desktop ပေါ်မှာ save
လုပ်ပေးပါ။ (Firefox) နဲ့ဆိုရင် Desktop ပေါ်မှာ default အနေနဲ့ save
ပေးလိမ့်မယ်။ save ပြီးရင် ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ Gmail အသစ်ကို ဖွင့်ပါ။
အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပဲ contacts ထဲကိုဝင်ပြီး Import ကိုနှိပ်၊ ပြီးရင် ကိုယ်
save ထားတဲ့ဖိုင်လေးကို ရွေးပြီးတော့ Import လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
6. ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးကို မေးလ်အသစ်မှာ add ပြီးသွားပါပြီ။
(၆) Disable Gmail backup (or) Hacking
Gmail အသုံးပြုသူများအတွက် Gmail account တစ်ခုမှ တစ်ခုဆီသို့ Email များအားလုံးကို တစ်စောင်ချင်း forward လုပ်စရာမလိုပဲ အားလုံး တစ်ခါတည်း
ပြောင်းနိုင်ရန်နဲ့ ကိုယ့် Gmail ကို ပိုမို စိတ်ချရအောင် Back Up လုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဆိုပြီး ဒီနေရာမှာ အဆွေတော်လေးက တင်ပေးပြီးသားပါ။ အခု အဲဒီ နည်းနဲ့ ကိုယ့် Gmail ကို သူများ လုပ်လို့မရအောင် ကာကွယ်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကိုအဆွေတော်လေး အခြား လုပ်စရာတွေ လုပ်လို့ရအောင် ၀ိုင်းကူပေးလိုက်တာပါ။
ဒီပို့စ်ကိုလဲ http://sofialay.blogspot.com ကနေပဲ ကူးယူ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် password သိတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဆီက Email တွေကို ကိုယ်မသိပဲ
ဖြစ်စေ၊ သိပြီးမှ ဖြစ်စေ ယူသွားခြင်း ခံလိုက်ရ သူတွေ အတွက်နဲ့ ကိုယ့်
Email အချင်းချင်း Data တွေပြောင်းရွှေ့ရာမှ ရပ်တန့်ချင်သူတွေ အတွက်
ပြန်ဖြေနည်း တစ်ခုပါ။ ကိုယ် password ပေးဖူးတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် က ကိုယ့်ဆီက
Email တွေကို ပထမ post မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို နည်းလမ်းအတိုင်း download ချ
သွားပြီ ဆိုပါဆို့။ အဟောင်းတွေ ပါသွားတာတော့ ဘာမှ မတက်နိုင်တော့ ပါဘူး။
အဟောင်းတွေ ပါသွားတာကို တားလို့မရပေမယ့် အသစ်တွေ သူ့ဆီမဝင်အောင် တားဖို့
လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သိသင့်တဲ့ အချက် များ ကို တစ်ပိုင်းချင်း
ပထမ တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ထဲကနေ ထပ်မထွက်နိုင်အောင် အားလုံး ပိတ်ပစ်ဖို့ပါ။ လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်ဆင့်ကတော့ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။
1. Settings ကိုသွားပါ။
2. Forwarding and POP/IMAP tab ကို ဆက်သွားပါ။
3. Forwarding, POP Download နဲ့ IMAP Access တို့ အားလုံးကို Disable forwarding, Disable POP နဲ့ Disable IMAP အသီးသီး ပေးလိုက်ပါ။
4. ပြီးရင် Save Changes button ကို click လိုက်ပါ။
အားလုံး ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပိတ်လိုက်တဲ့ အချိန်က စ ပြီး
နောက်ထပ် Mail တစ်စောင်မှ တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီ ရောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
တကယ်လို့ ကိုယ် အားလုံး ကို Disable ပေးထားချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်က
POP3 download နဲ့ download ချ ဖို့ ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် သူ့ဖက်မှာ
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံ အတိုင်း ပေါ်နေပါလမ့်မယ်။
ဒုတိယ သိရမယ့် တစ်ခု ကတော့ ကိုယ့် Gmail account password ကို သိတဲ့
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ဆီကနေ Email တွေကို POP3 မှာ download ဆွဲနေတယ်
ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီ ကို ဝင်လာတဲ့ Email တစ်စောင်ဟာ ကိုယ့်ဆီက download
ဆွဲနေတဲ့ လူဆီကို ချက်ချင်း မရောက်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၁ နာရီ ကနေ အများဆုံး
၄ နာရီ အတွင်းမှာမှ download ချ လို့ရတာပါ။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဆီ ကို
တစ်စောင် အသစ်ဝင်တာနဲ့ download ဆွဲနေတဲ့ လူဆီကို လည်း တစ်စောင် အသစ်
ချက်ချင်း ဝင်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီကို ဝင်လာတဲ့ Email
တစ်စောင်ကို ဝင်လာပြီးလို့မှ တစ်နာရီ မကြာသေးခင်မှာပဲ delete
ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် download ဆွဲနေတဲ့ လူဆီကို လုံးဝ ရောက်သွားမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ download စ မဆွဲခင် အချိန်တုန်းက ရှိသမျှ Mail အားလုံးကတော့
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အားလုံး ရောက်မှာပါ။
တတိယတစ်ခု ကတော့ အန္တရာယ်အများဆုံး ကိစ္စ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့
Mail ကို တခြားလူ တစ်ယောက်ယောက် က POP3 download နဲ့ ပထမ post မှာ
ဖော်ပြခဲ့သလို လုပ်သွားပြီးပြီ ထားပါတော့ အဲဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့ Mail ထဲမှာ
Compose Mail လုပ်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း From: ဆိုတဲ့
ပုံမှန် ဆိုရင် Compose Mail လုပ်ရင် အဲဒီ Dropdown မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်
Mail ထဲမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုံမှန်ဆို Email တစ်ခုက
Mail Address တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် From: ဆိုတာ ပေါ်စရာ
မလိုဘူးလေ။ ရွေးစရာမှ မလိုတာ။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုဖြစ်သွားရင် Email တစ်ခုတည်းက
Mail Address နှစ်ခု ပိုင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ့် Mail ကိုလည်း
တစ်ဖက်လူက ပိုင်သွားပါပြီ။ အဲဒီတော့ အဲဒီ Dropdown မှာသူ့ Mail ရယ်ကိုယ့်
Mail ရယ် နှစ်ခု ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲက သူကကိုယ့်ရဲ့ Mail ကိုရွေးပြီး
အခြား တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို Email ပို့လိုက်ရင် လက်ခံ ရရှိတဲ့သူက ကိုယ့်ဆီက
ရတာလို့ပဲ ထင်သွားမှာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လက်ခံရရှိတဲ့သူဆီမှာကိုယ့်
Mail Address သွားပေါ်နေမှာကိုး။ ပို့တာကသူ့ ထဲကပို့တာနော်။ ကိုယ်တောင်
ဘာမှမသိလိုက်ရဘူး။ ကဲကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Contact တွေဆီကို ပေါက်ကရ Mail
တွေလျှောက်ပို့လိုက်လို့ကတော့သေပြီ။ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များလဲ
စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ Mail
ရဲ့ Password ကိုဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးတာအကောင်းဆုံးပါ။ Password ဆိုတာ Mail
တစ်ခုရဲ့အသက်ပါ။ Password ကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုမှတော့ Mail
ရဲ့အသက်လည်းသေပြီပေါ့။ အားလုံးပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Email Password လေးတွေကို
(၇)G-Talk ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတောင်းဆို နားဆင်နိုင်သော အွန်လိုင်း ရေဒီယိုအစီအစဉ်...
မြန်မာတေးသီချင်းများထုတ်လွှင့်မှု၊ အနောက်တိုင်းတေးများ ထုတ်လွှင့်မှု၊
တရားတော်များထုတ်လွှင့်မှု၊ ဟာသအစီအစဉ်များ နှင့် အခြားသော
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရေဒီယိုကို နားဆင်လို့ရပါတယ်။
မိမိကွန်ပျူတာရှိ Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ
http://energy08.egihosting.com/22109/ (သို့မဟုတ်) mms://energy08.egihosting.com/22109/
website link လေးကတော့ http://www.eainmathlaing.com/ ပါ။
Window Media Player တွင် File Menu> Open URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ
http://89.238.146.148/APYTZ ထည့်ပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
website link လေးကတော့ http://www.apytz.net/ ပါ။ တိုက်ရိုက်ကလစ်နှိပ်ပြီးလည်း နားထောင်လို့ရပါတယ်။
MYMC (Myanmar Youth Media Club) ရေဒီယိုအတွက်
http://216.32.71.182/MYMC (သို့မဟုတ်) http://www.mymclub.net/radio ဆိုပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
website link လေးကတော့ http://www.mymclub.net/main/ ပါ။
သူတို့က Song Radio ကိုလွှင့်ထားပါတယ် ဒီအတွက် သီချင်းကို server ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ နားထောင်လို့ရပါတယ်။
သီချင်းများတောင်းဆိုရာတွင် ဆိုသူအမည် ၊ သီချင်းအမည် နှင့် Album Name ၊
From ........ To..........(မိမိမှ တစုံတယောက်သို့ဆိုပြီး) ဂျီတော့ထဲကနေ
ဖော်ပြပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာ သီချင်းများမရှိပါက G-talk
နှင့်ဖြစ်စေ G-Mail နှင့်ဖြစ်စေ
အသုံးပြုပုံကတော့ G-talk မှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနာမည်တွေကို Add သလိုပါပဲ။
(အိပ်မက်လှိုင်းရေဒီယို အတွက်) requestsongs@ourdream4all.co.cc
(အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယို အတွက်) apytz.dj@apytz.net
MYMC(Myanmar Youth Media Club) ရေဒီယိုအတွက် mymcradio@mymclub.net
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ account name လေးကို invite လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
သူတို့ဘက်က ချက်ချင်းကြီး accept လုပ်မလာသေးဘူးဆိုရင် နည်းနည်းတော့
အပျင်းပြေ G-talk ကနေ မိမိကြိုက်ရာသီချင်းတွေကို
(၈) Gmail ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ
တစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကို မေးလ်ပို့ လာတဲ့အခါ ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေ အခြားလက်ဆောင်စကားလေးတွေ ပါချင်သူများအတွက်
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ g mail နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးကို မောင်စေတနာ blog ဒီနေရောလေးကhttp://mgsaytanar.blogspot.com/2009/04/gmail.html gmail
၏လျှို့ဝှက်ချက်များ ပို့ စ်ကိုကူးယူမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အီးမေးလ်နဲ့ တောင်းဆိုထားတဲ့ ကိုအောင်ကြည်ဖြူရေ . . ။ မေးထားတဲ့
မေးခွန်းကို ဖြေကြားပေးလိုက်ပါပြီ။ တစ်ဖက်က email ပို့လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဘက်က
လက်ခံရရှိကြောင်း၊ ဒါမှ မဟုတ် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားဖို့ Gmail မှာ
လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ အောက်ပါ အဆင့်များ အတိုင်း လုပ်ပါ။
(၁) မိမိ၏ Gmail account ကို ၀င်ရောက်ပါ။
(၂) ပုံတွင် ပြသထားသည့် setting ကို ကလစ်ပါ။
(၃) ပြီးလျှင် General Tab ကို ရွေးပါ။ (၄) Vacation responder on ကို
ရွေးချယ်ပြီး မြင်နေရသည့် အကွက်တွင် မိမိရေးချင်သည့် စာသားများ ရေးပါ။
(ဥပမာ -ကျေးဇူးတင်စကား၊ အီးမေးရောက်ရှိကြောင်း စာသား)
(၅) ပြီးလျှင် save changes ကို ကလစ်ပါ။ (၆) မိမိ ရေးထားသည့် Subject သည်
အောက်တွင် ပြသထားသည့် အတိုင်း ပေါ်နေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ ပြုလုပ်ထားသည့်
အီးမေးလ်များ ပြန်ရုပ်သိမ်းချင်လျှင် End now ကို ကလစ်ရမည် ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အဆင့်များအတိုင်း ပြုလုပ်ပါက သင့်ဆီပေးပို့နေသော အီးမေးလ်တိုင်းကို အီးမေးလ် ပြန်နေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
(၉) Gmail တွင် ဆိုင်းထိုးမယ်
Gmail တွင် ဆိုင်းထိုးမယ်
ကိုယ်က သူများဆီ အီးမေးလ် ပို့တဲ့အခါ ဆိုင်းထိုးပြီး ပို့ကြရတယ် မဟုတ်လား။ Gmail မှာ အော်တိုဆိုင်း ရေးထားလို့ရတဲ့ Function ပါပါတယ်။ ဥပမာ-
နေကောင်းလား။ သတိရတယ်နော်။ ငါ့ဆီလဲ စာရေးအုံး။ မျှော်နေမယ်။
စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလို မောင်ဖြူဆိုတဲ့ ဆိုင်းကို Gmail မှာ ပုံသေ
ရေးထားလို့ ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က အတိုင်းလေး
၁) Gmail အကောင့်ထဲ ၀င်ပါ။
၂) Setting ကို နှိပ်ပါ။ General ကို ရွေးပါ။
၃) Signature မှာ On ရမယ်။ ပြီးရင် မိမိ ထိုးချင်တဲ့ ဆိုင်းနာမည်ကို ရေး။ အောက်ကအတိုင်း။
၄) ပြီးရင် Save Changes ။ ပြီးရင် Compose Mail ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်နေရလိမ့်မယ်။
၅) ဒါဆို မိမိက တစ်ပါးသူကို အီးမေးလ်ပို့တိုင်း ပေါ်နေမှာပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေ။
(၁၀)connection ကျနေစဉ် Gmail ဖွင့်နိုင်စေရန်
အဖွဲ့ဝင်များအားConnection ကျနေစဉ် Gtalk,Gmail
-mozilla ကို ဖွင့်ပါ။
-mozilla ထဲက Tools ကိုဖွင့်ပါ။
-Tools ထဲက Options ကိုနှိပ်ပါ။
-Options ထဲက Advanced ကိုနှိပ်ပါ။
-Advanced ထဲက settings ကိုနှိပ်ပါ။
-Settings ထဲက manual poxy ကို နှိပ်ပါ။
-manual poxy အောက်တွင် HTTP poxy ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပေါ်လာလျှင်HTTP poxy box တွင်
ဘေးက Post box တွင်
*အားလုံးပြီးသွားလျှင် OK နှင့်ထွက်လိုက်ပါ။
ဒါဆို ရင် Gmail ဖွင့်လို့ရပါပြီ။
Gtalk ဖွင်လိုလျှင်- gtalk settings ထဲဝင်ပြီး connection ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်
use the following poxy ကိုနှိပ်
Host box မှာ 212.93.193.72 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ
post box မှာ 443 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Gtalk ၀င်လို့ရပ်ပြီ။
************ သူငယ်ချင်းတို့ CONNECTION ကျခြင်းမှကင်းဝေးပါစေ************
poxy no. နေရာမှာ 212.93.193.72 ဆိုတာအပြင်... 212.93.193.82
,212.93.193.83, 212.93.193.84, block.appleak.net တို့ကို အဆင်ပြေသလို့
အစားသုံးသွားလို့ရပါတယ်။ prot ကတော့ 443 ပဲဖြစ်ပါတယ်...
(၁၁) G-mail (account)ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
အလကားရတိုင်း account တွေအများကြီးဖွင့်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုကို မမ ညီငယ် ညီမငယ် များအတွက်
June 9, 2009 at 5:51 pm (သိသင့်တယ်ထင်တာလေးတွေ...)
အခမဲ့ရတဲ့ G-mail တွေသင့်မှာများနေပြီ..ကျူခံရတာများလို့စိတ်ညစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ဖျက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖျက်ကြည့်ရအောင်…………
-Google Account Settings ဆီကိုသွားပါ။Edit ထဲကိုအရင်သွားလိုက်နော် ပြီးရင်.
-DeleteaService အောက်က Delete G-mail Service ကို Click ပါ။
ဒီနေရာမှာ Close account and delete all service and info associated with
i-google ,Google Docs စတာတွေပါ ပါသွားမှာပါ။
-Yes ,I want to permanently delete deletemememetoo@gmail.com and remove from my google account ကိုရွေးပါ။
-New Email Address နေရာမှာ သင့်ရဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာတစ်ခုခုအသစ်ရေးပါ။
G-mail က Secondary email ကိုသတင်းပေးရာမှာ အသုံးပြုလို့ပါ။ ဒီ E-mail က Google အတွက် သင့်မူပိုင်ပါပဲ။
-ဖျက်ပြစ်လိုက်တဲ့ E-mail ရှိ ၊မရှိ စောစောလေးက ပေးထားခဲ့တဲ့ Mail မှတစ်ဆင့်ပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး။
-Current Password အောက်က G-mail Password ကိုဝင်ပါ။
-Remove G-mail ကိုရွေးပါ။
-Account-neroplyegoogle.com မှ Confirmation ကို သင်ပေးခဲ့တဲ့ Secondary account မှာ ဖွင့်ကြည့်ပါ။
-Deletion Link ကိုဝင်ပါ။
-Password ရိုက်ထည့်ပါ။ပြီးရင် Verify: ပေါ့။
(၁၂) မလာနဲ့တော့ ဒီအီးမေးလ် [သူ့ ဆီကအီးမေးလ်မလာစေချင်ပါ]
Gtalk ကနေ တောင်းဆိုထားတဲ့ ကိုအောင်ကြည်ဖြူရေ ... Gmail မှာ ကိုယ်ဆီ မလာစေတဲ့ email တွေကို အောက်ပါ အတိုင်း လုပ်ပါတော့ဗျာ ...။
၁) မိမိ Gmail Account ထဲ ၀င်ပါ။
၂) Setting ကို သွားပါ။
၃) Filters ဆိုတာ ရှိပါ။ အောက်က ပုံတွင် ကွင်းဝိုင်း ပြထားသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
၄) from အကွက်မှာ မိမိ အီးမေးလ်ဆီ နောက်ထပ်မလာစေချင်တဲ့ email လိပ်စာဖြည့်။
ပြီးရင် Next Step ။
၅) ကိုယ်မလာစေချင်တဲ့ အီးမေးလ် နောက်ထပ်လာခဲ့ရင် အော်တို delete
ဖြစ်သွားအောင် Delete it Box ကို အမှန်ခြစ်ရွေး။ ပြီးရင် Create Filters
၆) အောက်ပုံလို ပေါ်ရင် အိုကေပြီ။
ဒါဆိုရင် မိမိဆီ လာနေတဲ့၊ နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အဆိုပါ အီးမေးလ်လာရင် Auto Delete လုပ်ပြီးသာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
(၁၂)Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေ
ယနေ့ တိုးတက်နေတဲ့ အိုင်တီ ခေတ်ကြီးမှာ လူတစ်ယောက် - gmail တစ်ခု အနေနဲ့ မရှိမဖြစ် ရှိကြမှာပါ ။ Gmail တစ်ခု မရှိရင်တောင် ခေတ်မမှီတော့တဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေပါပြီ ။ အရင်တုန်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ဖို့ address
တောင်းတယ် ။ ph: no. တောင်းတယ် ။ အခု အဲ့လို မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ gmail
ရှိလားလို့ မေးလိုက်တာနဲ့လုံလောက်ပါပြီ ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ခေတ် အခါ
ကြီးထဲမှာ လူတိုင်း နီးပါးလိုလို gmail အကောင့် တစ်ခု ဆီတော့ ရှိကြပါတယ် ။
အဲ့မှာမှ Gmail ရဲ့Tips And Tricks တွေကို သိတဲ့ သူ နည်းပါတယ် ။ လူတိုင်း
နီးပါးလောက် gmail ရှိပြီး သူလို ကိုယ်လိုပဲ သုံးနေကြမှာပါ ။ တကယ်တော့
Google က သူ့ ရဲ့ Product တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ gmail မှာ user အသုံး ပြု သူတွေ
လွယ်ကူ စေရန်အတွက် အမျိူးမျိူး တီထွင်ကြံဆပြီး အသစ် အသစ်သော Function
တွေကို ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးထားပါတယ် ။ အဲ့ဒါတွေကိုတော့ တစ်ချိူ့ gmail
အသုံးပြုသူ user တွေ အနေနဲ့ သိဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကြောင့် gmail ရဲ့ 
Tips And Tricks လေးတွေ ကို စုစည်း ပြီး အခုမှ စပြီး အသုံးပြုမဲ့ Beginner
user တွေ အတွက်ရော ၊ လက်ရှိ gmail အသုံးပြုနေပြီး လျှို
့ဝှက်ချက်လေးတွေကို မသိသေးတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ။
လျင်မြန်တဲ့ စာပို့ နည်း
email အသစ်တွေ ရောက်နေတာကို ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ
လုံခြုံရေး ပြည့်ဝတဲ့ Connection ကိုသုံးပါ ။
Spam တွေကို ဖျက်ဖို့ မလိုပါ ။
Label များကို အသုံးချပါ
မှတ်စုတို Notes များကို အသုံးချခြင်း
စတဲ့ အချက် 32 ချက်ကို တစ်ခုချင်း စီ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ အတွက်
အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့gmail ရဲ့tips လေးတွေကို သေချာ စွာ သိပြီး မိမိရဲ
့mail box ကို လိုအပ်သလို လျှင်မြန်စွာ မိမိစိတ်တိုင်း ကျ
အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် အမြန်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ပြီး
အဲ.. ဒါပေမဲ့ .. အဲ့ gmail tips 32 ချက်ထဲမှာ မပါတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကို ပြောပြမယ်ဗျ ။ ဘာလဲ ဆိုတော့ gmail အကောင့်မှာ . (dot) ပါတဲ့ သူတွေ ။ ဥပမာ
barnyar.kwikwa@gmail.com ပေ့ါဗျာ ။ အဲ့မှာ အလယ်က Dot လေးကို မထည့်ပဲ နဲ
့လည်း gmail အကောင့်ကို ၀င်လို့ ရပါတယ် ဗျာ ။ gtalk , gmail က အဲ့ .(dot)
လေးကို အလုပ်ထည့်မလုပ်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါလည်း လူသိနည်းပါတယ် ။ အဲ့ထဲမှာ မပါတဲ့
ယခုနောက်ပိုင်း gmail ရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက် အသစ်တွေကိုတော့ Gmail ထဲမှ လုပ်ဆောင်စရာနည်းလမ်းကောင်လေးများ ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးမှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ဒါနဲ့... တစ်ခု ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ ဗျာ ။ ဟီးး ဟီးး ။
rar file ဖြည်ဖို့ passowrd က www.mmitd.com နော် ။